Dhamaadka Muranka, Bilowga Isku Shaandhaynta Xukuumadda, Mushkiladda Kulmiye Iyo March 2017 | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Dhamaadka Muranka, Bilowga Isku Shaandhaynta Xukuumadda, Mushkiladda Kulmiye Iyo March 2017
Dhamaadka Muranka, Bilowga Isku Shaandhaynta Xukuumadda, Mushkiladda Kulmiye Iyo March 2017
Hargeysa(BGN)-Iyadoo Maxkamadda Sare shalay soo saartay go,aan xallaaleeyay mudda kordhintii guurtida, isla markaana ay mudaysay maalinta doorashada, ayaa durba waxa soo baxaya xoggo tibaaxaya in haatan Madaxtooyadu isbedel ku samayn doonto golaha xukuumadda.
Aqbalaadda xisbiyadda mucaaridka ee go,aanka Maxkamadda sare ayaa culays badan ka dejinaya Madaxtooyadda, oo intii hore la baaxaadegaysay furdaaminta muranka siyaasadeed iyo meel marinta mudda kordhinta. “Haatan madaxtooyada waxa u bilowday waqti cusub, maadaama la wada aqbalay go,aankii maxkamada sare, isla markaana waxa miiska saaran isbedel madaxtooyadu ku samaynayso golaha xukuumadda.” Sidaa waxa yidhi sarkaal u dhuun dalloola madaxtooyada oo la hadlay Ogaal. Wuxuu intaa ku daray, in ay suuragal tahay in isbedelku saameeyo wasiirada qaarkood, kuwaasoo la filayo inay isugu jiri doonaan qaar xilka laga qaado iyo qaar wasaarado kale loo wareejiyo. Sidoo kale xogahaasi waxay tibaaxeen, inuu isbedelka la saadaalinayaa saamayn doono Agaasimayaasha guud, madaxda hay,adaha madaxa banaan, wasiir ku xigeenadda iyo wasiiru dawlayaashaba.
Xogahaasi waxay intaa ku ladheen, in la tilmaamayo in isbedelkani uu saamayn ku yeelan doono Wasiirada culculus qaarkood, balse aanuu wada saamayn doonin inta hadalhaynta dadku u badan tahay ee lagu tilmaamo kuwa miisaanka leh. “Waxa bilaabmay xilligay madaxtooyadu dhiiran lahayd, balse sababo badan dartood dhiirashadoodu ma dhaafi doonto taabashada meelo kooban.” Sidaa waxa ku dooday mid ka mid ah dadka siyaasadda lafagura.
Dhanka kale dadka aadka ugu war haya mushkiladda xisbiga Kulmiye ayaa aad uga dardaarwerinaya, xilliga dhamaadka khilaafka xisbiga iyo isu diyaarinta doorashada, isla markaana waxay ka cabsi qabaan inuu sii jiitamo oo lagu dhiiran waayo xalintiisa, sidaana mar kale lagu gaadho diilinta maalinta doorashada, taasina ay sababi doonto mar kale waxa maanta la xallaaleeyay. “Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqayaa in aanuu murashax ahayn, laakiin ma sheegi doono ninka bedelaya, waxse ka wacan ka dhibaato yar in dibadda lagu soo dhameeyo kala tagsanaanta, hadayse sidaa u dhici waydo waxa wanaagsan in degdeg loo diyaariyo shirka golaha dhexe si mugdigu uga sii baxo mustaqbalka maalinta doorashada loo muddeeyay, isla markaana uu u dhaco si waafaqsan sharciga oo dimoqraadiyadi ku jirto, tartamayaashuna halkaa ku kala calaf qaadaan. Markaa wasiiro la kala bedelaa macno badan ma samaynaysee waxa looga fadhiyaa madaxtooyadda, inay goor hore dhameeyaan khilaafka xisbiga, soona saaraan murashaxa, aqlabiyadda xildhibaanada golaha wakiiladda ee taageersana ay ku wargeliyaan ansixinta xeerka doorashada wakiiladda. ”sidaa waxa ku doodday falanqeeye ka mid ah dadka dhexdhexaadka ah ee siyaasadda iyo dhacdooyinka la xidhiidha axadha, fasira ama tafniidda arrimaha daakhilaga ah iyo kuwa dibadda ee gobolka.
Previous articleWaa loo kordhiyee – Yaa loo kordhidhiyey ? Mase u qalantaa in loo kordhiyo? Boowe! bal dhugo dhacdooyinka hoose ee Xukuumada Siilaanyo ay ku fashilantay 5-tii sanadood ee ay hogaanka dalka haysay. qalinkii A/rahman fidhinle UK‏
Next articleMadaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Ka Hadlay Ujeedada Safar Uu Ethiopia Ku Tagay Iyo Cabashada Xildhibaanada Reer Awdal